April 8, 2021 - ApannPyay Media
ဒူးနာ ခါးနာခြင်းများအတွက် ဆေးနည်းတိုများ
April 8, 2021 by ApannPyay Media
ဒူးနာ ခါးနာခြင်းများအတွက် ဆေးနည်းတိုများ ဒူးနာတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ(လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ) စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတ ဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျမညာဖက်ဒူးကတစဈစဈနဲ့ကို ကိုကျပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ်…။ ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် … ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တယျ။ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်…. ခြေသလုံးပုံပါနေလို့ကန်တော့ပါရှင်….ရှားစောင်းလက်ပတ် လက်တစ်ဝါးစာကို ဆူးတွေ လှီးထုတ်ပြီးအပွားလိုက်နှစ်ခြမ်းခြမ်းလိုက်ပါ … .ပြီးရင်မီးနွေးနွေးလေးကင်ပါ အပူခံနိုင်သလောက် ကငျပြီးရင် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်းတင်ပါ ….. ပြီးရင်ရှားစောင်းလက်ပတ်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ပုံပါအတိုင်း ကြွပ်ကြွပ်အိပ် ကိုအနေတော်ညှပ်ပြီ အပွငျမှာပြန်ကပ်ထားပါ …. ပြီးရင် ကြွပ်ကြွပ်ကြိုးနဲ့မလျှော့မတင်းစီးပြီးထားပါ သွားစရာမရှိရင်တော့ နေလည်လဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ် ….. ညအိပ်ရာဝင်လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ် တစ်ညလုံးစည်းပြီးအိပ်လိုက် … Read more
နှလုံးသွေးကြောကျဥ်းရောဂါကိုလက်တွေ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တဲ့ဆေးနည်း ကျွန်တော် နှလုံးရောဂါ ပြင်းထန်စွာခံစားရချိန် ကျွန်တော် နေထိုင်ရာပုသိမ်မြို့ရှိပုသိမ် ဆေးရုံကြီး နွဇီဝကအထူးကု ဆေးခန်းတို ့တွင်တက်ရောက်ကုသခဲ့ရာ ဆေးစစ်ချက်အရ နှလုံးသွေးကြော သုံးချောင်းကျဉ်းနေပြီးတစ်ချောင််းမှာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့သော ကြောင့် နှလုံးစက် ထည့်ရမည့်အခြေနေဖြစ်ခဲ့ပါသည်- ထိုအချိန်တွင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့် လို ခွဲစိပ်ခါနီးလူနာတစ်ဦး မခွဲစိပ်ရပဲသက်သာပျောက်ကင်းသွား သည်ဆိုသောဆေးနည်းကိုပေးသဖြင့် ရန်ကုန် ၌ဆေးကုသခံရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ခုနှစ်ရက်မျှဆက်တိုက်သောက်ခဲ့ပါသည်- ထို ့နောက်ရန်ကုန်အာရှတော်ဝင် အထူးကု ဆေးခန်း တွင်သွားရောက်စမ်းသပ်ရာ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့မှုများမရှိတော့ပဲအကောင်းပကတိဖြစ်နေကြောင်းအံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိရပါသည်- ဆရာမကြီးမှာပုသိမ်မှဆေးစစ်ချက်များကိုကြည့််၍မယုံနိုင်ဖြစ်ကာသေချာစေရန် မဟာမြိင် အထူးကုဆေးခန်း၌24နာရီ စက်ဖြင့်ထပ်မံစမ်းသပ်ရာနှလုံးသွေး ကြောများပုံမှန်ကောင်းမွန်နေကြောင်း သေချာသွားတော့သည်- ကျွန်တော်ခံစားနေရသောရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းနှင့်ဘယ်ဘက် လက်မောင်း ကိုက်ခြင်းဝေဒနာများလည်းပျောက်ကင်း သွားပါသည်- ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့် လို နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဝေဒနာခံစား နေရသူများအတွက်စေတနာရှေ့ထား၍ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်- ဆေးနည်းမှာ ၁- ကြွက်နားရွက်မှိုနှစ်ကျပ်ခွဲသား ၂-တရုတ််ဇီးသီးငါးလုံး ၃-ချင်း(ဂျင်း)တက်လက်တစ်ဆစ်ခန့်… Read more
(၄) ရက်အတွင်း မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုများ ဝုန်းဝုန်း နဲ့ကျတဲ့နည်း
(၄) ရက်အတွင်း မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုများ ဝုန်းဝုန်း နဲ့ကျတဲ့နည်း လိုအပ်သောပစ္စည်းများ- ဂျင်း ပါးပါးခြစ်ထားပါ (လက်ဖတ်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) သခွါးသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ သံပရာသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ ပူစီနံ အရွတ် (၁၂ ရွတ်) အထက်ပါပစ္စည်းများအားလုံးကို အနည်းဆုံး တစ်လီတာဆန့်ဝင် အဝနည်းနည်းကျယ်သော ရေဘူးထဲသို့ ရောထည့်ပါ။ ပြီးလည် ရေအပြည့်ထည့်ပီး အဖုံးပိတ်၍ တစ်ညထားပါ (ရေခဲသတ္တာထဲထည့်ကပိုကောင်းသည်) သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၅နာရီထားပါ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစ၍ သခွါးသီးများ သံပရာသီးများကို ဖယ်၍ တစ်နေ့အတွင်း ကုန်အောင်သောက်ရမည် ထိုနည်းအတိုင်းနေ့စဉ်သောက်သုံးပါက ၄ရက်အတွင်း အသားအရည်လှ အဆီကျ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း အဆိပ်တောက်များပြေ၍ ဝမ်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများ ကင်းဝေးစေမည်။ (၄) ရက်အတွင်း မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုများ … Read more
တစ်ညနဲ့တစ်မနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံရှိသေးတယ် ကျောက်ကျလာတဲ့လက်တွေ့ဆေး
တစ်ညနဲ့တစ်မနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံရှိသေးတယ် ကျောက်ကျလာတဲ့လက်တွေ့ဆေး ၂ ရက်နှင့်ကျောက်ကျတဲ့နည်း ဆန် ဆေးရေ နဲ့ စပါးလင် စိမ်ပြီး သောက် တာ တစ်ညနဲ့ တမနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံရှိသေး တယ် ကျောက် ကျလာတယ် ။ အဖေ့ ဆီက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးနည်းဖြန့်ပေးတာပါ ။လက်တွေ့ တစ်ရက်နဲ့တစ်ည အောင့် တာ မခံနိုင် လို့ ဆေးရုံပြတာ ၂.၁ ၁၈ ရက်နေ့ဆေးရုံမှာ လေဆာနဲ့ချေဖို့ချိန်းထား ပြီးသား ကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ညွှနိ လို့ သောက်ကြည့်တာပါ ။ ဆေနည်းညွှန်တဲ့ ကို အသေး လေးလဲ ကျေး ဇူး အရမ်း တင်ပါတယ် ။သူ့မိတ်ဆွေတုန်းက လဲ ဘန် ကောက် … Read more
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကို လူတိုင်းကြုံတွေ့ဖူးပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကြုံလာတဲ့ အခြေအနေတွေ အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့ မှာတော့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို မကြာခဏခံစားနေပြီး စိတ်ခံစားမှုသက်သက်တွင်မကဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေပါ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေကလည်း တခြားသော ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ တူနေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တတ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တာဟာ ရုတ်တရက် နှလုံးထိခိုက်ခြင်းနဲ့ တခြားနှလုံးရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိက စိုးရိမ်ပူပန်မှု ကို မကြာခဏ ခံစားရတဲ့ သူဆိုရင် သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို သိထားသင့်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်အောင့် လက္ခဏာတွေက ဘာလဲ စိုးရိမ်ပူပန်မှု လက္ခဏာဟာ လူတစ်ဦးခြင်းအပေါ်လိုက်ပြီး ကွာခြားပါတယ်။ လူတစ်ဦးထဲတောင်မှ တစ်ခါတရံ ခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေ … Read more
နွေမှာအဖြစ်များတဲ့ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
နွေမှာအဖြစ်များတဲ့ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းများ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပိုင်း ဧပြီလအတွင်းက အသက်(၅၀)ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ခရီးသွားရင်းကားပေါ်မှ အဆင်းတွင် ရုတ်တရက်လဲကျပြီး သတိမရတော့၊ ဆေးရုံသို့ရောက်သောအခါ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး သေဆုံးသွားရသည်ဟု သိရသည်။ လူအများရှေ့တွင်ပင် ခရီးသွားရင်း အကောင်းပကတိမှ လဲကျသေဆုံး ခြင်းဖြစ်သဖြင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြရသည်။ ဤသို့ပင် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးရမှုမျိုးကို မကြာခန တွေ့ကြုံကြားသိရတတ်ပါသည်။ အထိတ် တလန့်လည်း ဖြစ်တတ်ကြသည်။ သံဝေဂလည်း ယူစရာဖြစ်သည်။ “ဟယ်… မနက်ကပဲ တွေ့လိုက်ရတယ် အကောင်းကြီးကို ချက်ချင်းကြီး ရုတ်တရက်ဘယ်လိုဖြစ်ရ တာလဲ ထင်တောင်မထင်မိဘူး၊ နှမြောလိုက်တာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြသည်။ “ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ… ရုတ်တရက်ကြီး အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နေတာ သူ့မှာ လုပ်စရာတွေ လည်း အများကြီးကျန်သေးတယ် သူ့ကို အားကိုးနေတဲ့ … Read more
ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက်
ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် နှင်းဆီနီအရွက် လျှို့ဝှက်ချက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း တစ်မျိူးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဆေးနည်းက လွယ်ကူပြီး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ဝဲနှင်းခူအစိုနှင့် ပွေးအတွက် ဆေးနည်းစုံပြီး မပျောက်ကင်းလျှင် စမ်းကြည့်ပါ။ဆေးနည်းကတော့ – နှင်းဆီအနှီအရွက်ကို နေလှန်းပါ။ တခြာနှင်းဆီထက် နှင်းဆီအနီက ပိုစွမ်းသည်။ နေလှန်း၍ ခြောက်သွေ့သွားလျှင် ၎င်းကို ပြာချပါ။ထိုပြာအား အုန်းခွံအဆီနှင့်ဖျော်ပါ။ (အုန်းသီးအခွံကို မီးရှို့၍ ထွက်လာသည့်အဆီကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်)။ထိုသို့ဖျော်ပြီးလျှင် အနာကိုလိမ်းပေးပါ။ အလျှင်အမြန် ပျောက်စေသည့် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်မျိူးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆင့်ကမ်း၍ လွပ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်…။ အနာရောဂါကင်းရှင်းကြပါစေ…။ စာကိုး – နက္ခတ္တရောင်ခြည် Credit-Sai Min Thant ဝဲႏွင္းခူအစိုႏွင့္ ေပြးအတြက္ ႏွင္းဆီနီအရြက္ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဝဲႏွင္းခူအစိုႏွင့္ ေပြးအတြက္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ေဆးနည္း တစ္မ်ိဴးကို … Read more
ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့အလှပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ နတ်သမီးလေးများအတွက် ချွေးပေါက်ကျဥ်းစေဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း
ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့အလှပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ နတ်သမီးလေးများအတွက် ချွေးပေါက်ကျဥ်းစေဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ချွေးပေါက် ကျယ်လို့ စိတ်ညစ်နေ ပါသလား။ လုံးဝ မညစ်ပါနဲ့။ အခုပြောမယ့် နည်းက ချွေးပေါက်ကျယ် သူတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပေး မယ့်နည်းတခု ဖြစ်လို ့ပါ ။ ကြက်ဥအကာကို သုံးရုံပါပဲ။ ပြောစရာတခုရှိတာက နည်းနည်းလက်ဝင်တာပါ။ ကြက်ဥ အကာကို ခရင်မ် ပုံစံဖြစ်တဲ့ အထိ အဆက်မပြတ်တော့ ခေါက်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကြက်ဥအကာ (၁) လုံး သကြား ထမင်းစား ဇွန်း (၁) ဇွန်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ၁။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြက်ဥ တလုံးကို ဖောက်ပြီး အကာကို ပန်းကန်လုံး တစ်ခုထဲ ထည့်ပါ။ အဝါနှစ် … Read more
ဆေးရုံထိမသွားဘဲ သင့်နှလုံးကောင်း မကောင်းကို အိမ်မှာတင်စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်းစစ်မယ်
ဆေးရုံထိမသွားဘဲ သင့်နှလုံးကောင်း မကောင်းကို အိမ်မှာတင်စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်းစစ်မယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ နှလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အဓိကအကျ ဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ကို အမြဲ ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးနေဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆေးခန်း သွားပြီး မစစ်ဆေး ခင်မှာ ကိုယ် တိုင် စစ်ဆေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေး ရှိပါတယ် ။ ဒီနည်းနဲ့ သင့် နှလုံး ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးဖို့ စက္ကန့် ၃၀ ပဲ အချိန်ပေး ဖို့ လိုပါ တယ်နော်…. ပထမ အဆင့် အနေနဲ့ ရေဇလုံ တစ်လုံးထဲကို ရေ အပြည့် ထည့်ပြီး ရေခဲတုံးလေးတွေ ထည့်ပြီး ရေခဲတုံးတွေ အနည်းငယ် ပျော်သွားအောင် မွှေလိုက်ပါ … Read more
ထိပ်ကပ်နာ ဆေးနည်း ကျွန်တော် ထိပ်ကပ်နာ ဖြစ်နေတာ ၅. နှစ်လောက် ရှိနေပါပီ ။ ဘယ်ဆေးနဲ့မှ မသက်သာခဲ့ပါဘူး ဒန့်ဒလွန် အမြစ်ကိုသွေးပီး လည်ပင်းမှာလိမ်းကြည့်ပါ ။ တကယ် သက်သာပါတယ် ။ နှာခေါင်းပွင့်တယ် ချွဲမထတော့ဘူး နေရတာ သက်သာတယ် ။ အအေးမခံပါနဲ့ အခုမှလိမ်းတာ သုံးရက်လောက် ပဲရှိသေးတယ် ။ ထိပ်ကပ်နာဝေဒနါရှင်အားလုံး ပျောက်ကင်းကြပါစေ တကယ်သက်သာတာပါ ။ နဲနဲပူတယ် စပ်လဲစပ်တယ် လိုင်းပေါ်ဆေးနည်းပေးတဲ့သူတွေလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘဝတူတွေသက်သာပါစေ”””””” Credit ပြန်လည်မျှဝေပါတယ် Kozaw (Ygn) ထိပ္ကပ္နာ ေဆးနည္း ကၽြန္ေတာ္ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္ေနတာ ၅. ႏွစ္ေလာက္ ရွိေနပါပီ ။ ဘယ္ေဆးနဲ႔မွ မသက္သာခဲ့ပါဘူး ဒန္႔ဒလြန္ အျမစ္ကိုေသြးပီး လည္ပင္းမွာလိမ္းၾကည့္ပါ … Read more